Chung-Ang University Iinkcukacha
isixeko : Seoul
isifinyezo : ao
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Chung-Ang University
Faka kunye Chung-Ang University
Chung-Ang University liziko labucala kunye 30,000 abafundi kunye 982 amalungu yeFakhalthi. Le nkqubo ibandakanya 10 iikholeji zesidanga kunye 16 izikolo isidanga. Isebenza neekhampasi ezimbini, e Seoul and Anseong, Korea.
esekwe 1918, Cau uye wanyamezela kule khosi buhlungu kwimbali yanamhlanje eKorea, kukumela kwephupha bayo 'Inyaniso Justice ". Ukusukela ngoko, Cau lithathe indima ephambili ekunyamekeleni zizifundiswa yohlanga. Ukuhlonitshwa njengeziko phambili nemfundo ekumgangatho, Cau wawukhawulezisa phezulu isantya ezintsha kwimfundo zengingqi.
accreditied ngokupheleleyo yi-Ofisi yoMphathiswa weMfundo yaseKorea, Cau inika uluhlu olubanzi sokuQala, inkosi kunye neenkqubo zobugqirha kubandakanywa kwisikolo umthetho, iinkqubo owayefunde lwehlabathi kwaye isikolo zonyango. Enkosi imisebenzi oludlamkileyo ezi zikolo ', Cau babhaliswa phezulu kwi uhlanga ukusuka xclusive kule minyaka isibhozo idluleyo.
koko, Cau ibonakaliswa uhlanga inyanisekileyo kwiinkalo kwikhemesti, inkcubeko kunye yobugcisa nemfundo. Ngoncedo lezikolo zalo zobugcisa nenkcubeko, eyunivesithi limi embindini yomtshangatshangiso inkcubeko Korean, ngoku ukutshayela Asia nangaphaya.
Njenge ziko labucala enkulu, Chung-Ang University izinikele ngokupheleleyo nokukhokela abafundi bayo Korean ngamazwe ukukucinga iinjongo ebomini babo baze bafikelele kwimpuhle yabo epheleleyo eluntwini ezinokhuphiswano kwihlabathi.
ishishini & Economics
College of Education Jikelele
Dr. Bum Hoon Park sivulwe njengoko 12 University nguMongameli ngoFebruwari 2005. Njengoko isabelo sakhe sokuqala phezu unyulo, wayephatha ukuvavanywa yaseKorea Council for Education University, marketing of capital, BK21, Ukusekwa kwe-Professional Graduate School of Law, kunye namanye amashishini zesizwe.
Ngokutsha kwe Education Science Technology Faculty, ebezisoloko impikiswano enkulu kusalindwe, yaba yimpumelelo kakhulu wachongwa eyunivesithi ephambili bawongwa nokugcinwa lwesibonelelo (KRW 9,100,000,000) ifana naleyo kwiiyunivesithi competitor enkulu, nangona kwethuba layo kunyaka-1 probationary.
Emva ngokutsha lweenkqubo zidanga, ingqesho lokwamkelwa ezintsha, ubhaliso lwabafundi yangoku, imeko yezimali kunye neerekhodi zolawulo ngokubanzi kwizikolo ezithathu zobungcali 11 kwizikolo ezizodwa, zahlalutywa ukuchonga iindawo ezisafuna ukuphuculwa nokwandisa umgangatho wokufundisa. Ngaloo ndlela, 32 ngaphandle kwe 42 kwabasebenzi kwizikolo zobungcali kwizikolo ezikhethekileyo asiwe iziqu ngokubanzi, yaye 10 izikhundla kwanciphisa. Amalungu isabelo esikolweni owaphumelela ngokubanzi ziye ezinezibonelelo ukuba abe imifuziselo zaseprayimari kokusekwa Research Priority Group (abasebenzi), ukuze kwakhiwe kolawulo yophando-phambili.
Dragon 2018(2001-2004), leyo isicwangciso sophuhliso zayilelwa phantsi umongameli 11 eyunivesithi ithwalwe ngazo eyunivesithi ekufezekiseni umbono ekujoliswe eyunivesithi yi leMinyaka engu, yaphinda sasibekw CAU2018 +(2005-2008). CAU2018 + lidwelisa index yokuxabisa mveliso eyahlukeneyo kunye umthombo wengeniso ekulindeleke ngokweenkcukacha. Ukuze kufezeke iinjongo, CAU2018 + yaphunyezwa ngezigaba ezibini.
Kwiminyaka yokuqala emine Dr. elithi Bum Hoon Park e-ofisini, izixhobo zaye kakhulu imali kwimfundo / izixhobo zophando. Ngaloo ndlela, yesizwe inkulu uMthetho Hall kwakhiwa ngoFebruwari 2007, kunye master isicwangciso sibhalwe ukuze kusakhiwa Pharmacy and Natural Science R&D Amaziko emhlabeni Amangeno Main in Campus 1, kwaye i Engineering R&D Centre yi Gymnasium,
in 2008, i Media Practice Section yasekwa kuMthetho Hall kunye 400 iiwadi ezongezelelweyo zaye zongezwa esibhedlele bavumile. ngokunjalo, i Chung-Ang Site Plan Construction, ifakiwe kwisiCwangciso CAU2018 + Development zavakaliswa ngeli.
ngo November 2007, ugunyaziso efunyenwe Hannam-si, okuphuhlisa tertiary, Hannam Campus. Camp Colbern, leyo ngaphambili i US Army instillation of 86,000 pyeong ziya salungiswa injongo. Iqela uya ibhendi besifundo ngasinye ukongamela ulawulo.
244 abasebenzi yokufundisa bexesha elizeleyo aqeshwa phakathi 2005 yaye 2009, yaye kwisiqingatha sokuqala sonyaka ka 2009, 25 Abasisigxina kunye nabasebenzi part-time aqeshwa.
Law and Izikolo Medical ziye zasekwa ngo March 2009.
KRW 40 billion kwemali zophuhliso, KRW 166.3 billion kwesibonelelo yophando lwangaphandle, no KRW 17.3 billion zoncedo zikarhulumente elabelwe njengequmrhu ezixhaswa ngemali ngurhulumente sele lukhuselekile phezu 4 iminyaka Dr. Ekuvulweni Bum Hoon Park kaThixo kwi ofisi. Isibalo KRW 223.6 billion isixa-mali inkulu lifumene imali kwimbali eyunivesithi.
NgoMeyi 2008, inkampani jikelele, Doosan Group, yafakwa njengeziko lemfundo, kunye Yong-Sung Park wonyulwa njengoko 9 nguSihlalo weBhodi.
Ukuqeshwa USihlalo Park, ngubani kuthethwano icandelo-ukududulelwa Doosan Group ukusuka impahla yabathengi kwishishini enzima, Limele savuka leyunivesithi. ngaphakathi 80 imihla ofisi ukuthatha, intlanganiso yabanjwa nabasebenzi ukufundisa ku 27 EyeThupha 2008, apho CAU2018 + Mid-Term iziCwangciso zoPhuhliso lapapashwa kunye nolwalathiso elitsha icebo "Ukukhetha kunye mmandla, Ukomeleza of Amandla Executive, Ukusekwa onesidima Cycle Structure ".
The Degree Management System kuqiniswe ukukhuthaza abafundi ukuba bafunde ngokuzimisela, njengoko ukuze isidanga, abafundi aye enziwa ukuze bafikelele kwinqanaba ubuncinane kwizifundo ezinyanzelekileyo ezifana IsiNgesi ne-Akhawuntingi.
Ukuze inkxaso olu hlobo yophando, imfundo kunye nokwenza ngempumelelo, i R&D Centre for the College of Pharmacy kunye zokulala entsha kusenzelwa abafundi ezakhiwayo, i Library Central lalungiswa, kwaye esibhedlele kwandiswa ukuba ilingane 300 iiwadi ezongezelelweyo.
iiprojekthi zophando nawo inkxaso yiKomiti eYodwa Ukuqinisa kwekhono Research.
sele olunjalo utshintsho kwabangela nokonyulwa iinkampani ezintandathu ezintsha kwi zigaba yesibini lweshishini BK21, kwaye ibhajethi KRW 6 billion eyabelwe kwiqela phambili kwezophando, ngaloo ndlela ukuphumeza isicwangciso "ukukhetha mxube".
Le nkqubo ngqo nokunyulwa kaMongameli kwayekwa, kwaye kwafakwa inkqubo yokuqeshwa. Ngenxa yoko, uMongameli 12, Dr. Bum Hee Park, waphinda-wamiselwa kwi-ofisi njengoko umongameli 13 ezilandelelanayo.
Le projekthi inkulu ukuba phikelela nguGqr. Bum Hee Park kunye corporation, kukusekwa Hannam Campus. in 2007, iMemorandamu yokuQondana baguqula ne Hannam, yaye ngaloo ndlela kulungiselelwa indalo Hannam Campus amaphulo aqhubekayo.
Ukususela ngoFebruwari 2009, Chung-Ang University, njengeziko olubanzi, livelise enye owaphumelela ngokubanzi, izikolo ezihlanu owaphumelela professional, 11 izikolo ezizodwa graduate, 18 iikholeji eneemodyuli kwi khampasi lonke Seoul and Anseong, kwaye ukhuphe elipheleleyo 147,196 degrees Bachelor kaThixo, 29,940 izidanga zabo zeMasters, yaye 4,275 Doctorates.
ngoMatshi 2014 Chung-Ang University waqalisa ukwamkela abadlali umdlalo ividiyo iSebe kwabo Science Sport.
Uyafuna ukuxoxa Chung-Ang University ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Chung-Ang University kwi Map
iifoto: Chung-Ang University ezisemthethweni kwiFacebook
reviews Chung-Ang University
Dibanisa ukuxoxa of Chung-Ang University.